Izindaba - Siyakwamukela ku-47 CIFF
Yethulwe ngo-1998 nabakhangisi abangama-384, indawo yombukiso yamamitha-skwele angama-45,000 nokuhambela abathengi abangaphezu kuka-20 000, i-CIFF, i-China International Furniture Fair (i-Guangzhou / Shanghai) ibanjelwe ngempumelelo amaseshini angama-45 futhi yakha ukuhweba okukodwa okuthandwa kakhulu emhlabeni ipulatifomu yokwethulwa komkhiqizo, ukuthengisa kwasekhaya kanye nokuhweba ukuthekelisa embonini yokuhlinzeka.
Isungulwe futhi yathuthukiswa iminyaka eyi-17 eGuangzhou, kusukela ngoSepthemba 2015 yenzeka minyaka yonke eGuangzhou ngoMashi naseShanghai ngoSepthemba, izikhungo ezimbili zezentengiselwano ezinamandla kakhulu eChina.
Uhlobo olusha lwebhizinisi lokuqinisa imboni yefenisha Kusukela ngo-2021
“Umklamo wokuklama, ukuhwebelana komhlaba wonke, ukuthengiselana okuphelele” yingqikithi entsha lapho i-CIFF Guangzhou izibeka kabusha endaweni yayo ukusiza ukuthuthukiswa komkhakha esimweni sobhadane lomhlaba wonke.
Umagazini wama-47 weChina International Furniture Fair, umcimbi omkhulu wokuklama ifenisha wango-2021 eChina, uzohlose ukukhuthaza ukubaluleka komklamo nokwakha imodeli yebhizinisi entsha ethintana nemicimbi yamanje kanye nemithetho emisha yomdlalo. Imodeli isuselwa ekubambisaneni phakathi kwemakethe yangaphakathi engajwayelekile nokukhula okuqhubekayo kokuthunyelwa kwamanye amazwe, kanye nokuhlanganiswa kokuphakanyiswa okungaxhunyiwe ku-inthanethi naku-inthanethi ukuze kunikezwe iphothifoliyo yombukiso elungiselelwe, ebanzi emele ngokwanele imboni yonke yefenisha, ehlala isekela izidingo wabakhangisi nezivakashi.
I-CIFF Guangzhou 2021 izobanjwa ngezigaba ezimbili ezihlelwe umkhakha womkhiqizo: owokuqala, kusuka ngomhlaka 18 kuya ku-21 Mashi, obekelwe ifenisha yasekhaya, yangaphandle neyokungcebeleka, ukufaka izesekeli nezindwangu; owesibili, osukela ngomhla ka-28 kuya ku-31 Mashi, owefenisha yasehhovisi nosihlalo, impahla yasendlini, ifenisha yensimbi, ifenisha yezindawo zomphakathi nezindawo zokulinda, izesekeli, izinto zokwakha nemishini embonini yefenisha.
Ukumboza indawo ephelele yamamitha-skwele angama-750,000, i-China Import and Export Fair Complex eGuangzhou kulindeleke ukuthi ibambe izinkampani ezingama-4,000 kanye nezivakashi ezingama-300,000 zokuhweba.
Impumelelo yezinguqulo ezimbili zokugcina ze-2020 ze-CIFF, ebibanjelwe ngoJulayi eGuangzhou nangoSepthemba eShanghai, ngesikhathi esiyinkimbinkimbi emlandweni kuklonyelise ukutshalwa kwemali kwabagqugquzeli, ukusebenza kanzima, nokuzibophezela ekunikezeni njalo abadlali abaphambili bemboni yefenisha , amathuba okhonkolo.
I-CIFF iqinisekisa isimo sayo njengeplatifomu yebhizinisi ebaluleke kunazo zonke emakethe yase-Asia, umcimbi ongenakuphikiswa lapho izinhlobo ezinhle kakhulu zemiklamo zizokwethula imikhiqizo emisha enezakhiwo ezihehayo kanye nemiqondo emisha ngokuhambisana nezitayela zakamuva emakethe eguqukayo ngokushesha efuna okuphezulu -Izixazululo zokudala, ezigcwaliswa yimicimbi ehlonishwayo nemincintiswano yokuqamba.
Siyakwamukela embukisweni wethu!
Izinsuku namahora okuvula
Mashi 18-20, 2021 9:30 am-6:00pm
Mashi 21, 2021 9:30 am-5:00pm
Indawo yeVenue Poly World Trade Center
Cha. 1000 Xingangdong Road Haizhu District Guangzhou China